Tsy haha taona fotsy ny 2020: hotanterahina ny “Rallye international de Madagascar” | NewsMada
Tsy haha taona fotsy ny 2020: hotanterahina ny “Rallye international de Madagascar”
Notapahin’ny fivoriambe ara-potoan’ny federasiona sport automobile malagasy (FSAM), ny alarobia lasa teo, tetsy amin’ny foibe toerany etsy Analakely, fa hotanterahina ny 27, ny 28, ny 29 novambra ho avy izao, raha tsy misy ny fiovana, ny “Rallye international de Madagascar” (Rim). Fihaonana, karakarain’ny federasiona sy ny klioba TMF Rallye. Mba tsy haha taona fotsy sady ho famaranana ny 2020 ny antony hanatontosana izany sady hisian’ny fifankahitan’ireo mpanamory rehetra efa mangetaheta fifaninanana.
Na izany aza, tsy natao ofisialy ny hazakazaka fa ho an’ny fahafinaretana fotsiny ihany ka tsy ho anisan’ireo hakana isa ho an’ny taom-pilalaovana. Ho fanajana ny fepetra ara-pahasalamana sy ho fisorohana ny fitangoronan’ny olona be loatra, tsy nasiana ary nofoanana ny “Special slalom” efa fanao sy mahazatra ny TMF. “Notazomina ny anarana “Rim” fa tsy nasiam-panovana satria io ny fifaninanana manakatona hatrany ny taom-pilalaovana. Faniriana ihany izany fa hiankina betsaka amin’ny fahafahana manatanteraka fihaonana fanatanjahantena eto amin’ny firenena ihany ny ahafahana manao azy ity”, hoy Rakotofiringa Jimmy, filohan’ny federasiona.
Tsiahivina fa tsy nisy ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, tamin’ity taona ity, noho ny fisian’ny valanaretina Covid-19. Na teo aza izany, nahazo fankatoavana “quitus” 100%, tamin’ireo klioba mpikambana ny federasiona sport automobile malagasy.